I-Zumbito Suite 🍃 - I-Airbnb
I-Zumbito Suite 🍃
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguGabriela
Inebhedi elala abantu ababini, igumbi lokuhlambela labucala, amanzi ashushu neWiFi.
Yonwabela indalo kunye nemozulu enayo i-El Valle de Antón ngokukhethekileyo kweli gumbi lihle kwaye lemihla ngemihla elikwiinduli zaseIndiya Lala kamnandi kwaye yabucala, kufutshane nemilambo, umzila wobugcisa kunye nomzila wokulala waseIndiya.
Sinikezela ngesidlo sakusasa esincomekayo ngeendleko ezongezelelweyo ukuba uyathanda ngaphambi kokuphuma ukuze wenze izinto ezahlukileyo.
Indawo yam ikufutshane kakhulu nendlela eya kwindawo yokulala yaseIndiya ukuba ufuna ukonwabela le ndawo. Le ndawo ipholile kwaye itofotofo kakhulu inegumbi lokuhlambela labucala elinamanzi ashushu neWiFi kuyo yonke indlu sineendawo zokubambelela ezityebileyo ukuze uphumle.
1 ibhedi elala abantu ababini, iisofa eziyi-2, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
2" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-HBO Max, I-Netflix
Ndiyakuthanda ukuncokola neendwendwe ngoxa ndinendawo yazo. Ndisoloko ndifumaneka ukuze ndizincede ukuba andikho kwincoko.